Wp/shn/မိူင်းယွင်း၊ ဝဵင်း - Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shnWp > shn > မိူင်းယွင်း၊ ဝဵင်း
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 21°10′54″N 100°21′34″E﻿ / ﻿21.18165°N 100.35942°E﻿ / 21.18165; 100.35942
1,870 ထတ်း (570 မီႇတႃႇ)
ဝဵင်းမိူင်းယွင်း (IPA: [mɤ́ŋ jɔ́ŋ]), (မၢၼ်ႈ: မိုင်းယောင်းမြို့), (ဢင်းၵိတ်ႉ: Mongyawng ), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Moengyaung]) ၼႆႉ မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယွင်း၊ ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ ၸႄႈမိူင်းတႆး၊ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉဢေႃႈ
↑ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းအတွင်းရှိ ခရိုင်များပြ မြေပုံ. မြန်မာ သတင်းအချက်အလက် စီမံခန့်ခွဲမှု ယူနစ် (MIMU) (၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇). Retrieved on ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၇။
Retrieved from "https://incubator.wikimedia.org/w/index.php?title=Wp/shn/မိူင်းယွင်း၊_ဝဵင်း&oldid=4348472"